Caadi ah: Ka Badbaadi Maxay Khasaarahaan Ku Sameynayaan Goobaha Wareegga ee WordPress
Waxaan badanaa maqalnaa boggaga internetka ee lagu bartilmaameedsaday smsers iyo spamers. Inta badan webmasters waxay u maleynayaan in haddii aysan jirin wax xog ah oo la xaday sida faahfaahinta kaararka deynta ama macluumaadka bangiga, khatar gelinaya boggooda. Nasiib darro, waxay khaldan yihiin sida hijackerku wax badan ku samayn karaan boggooda WordPress - peru day trips from lima.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee joornaalada ama spameriyadu waxay kuugu sameyn karaan goobtaada waxaa hoos ku xusan Ryan Johnson, oo ah khubaro hormarineed Semt .
Meelaha la gooyey oo aad u qaadatid goobo:
Inta badan, koodhka ama spammers waxay beddelaan nuxurkaaga iyo maqaashaada internetka iyaga u gaar ah. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah boggaga internetka ayaa la weeraray, iyo siyaabaha siyaasadeed waxaa lagu beddelay maqaal la xidhiidha argagixisanimada. Kaysariyayaashu waxay si daacadnimo ah ugu qanacsan yihiin in ay soo weerareen boggagaaga, waxna kama qaban kartid wixii ay sameeyeen. Qof kasta oo booqda boggaaga ayaa ogaan doona in goobtaada la jabsaday. Tusaale ahaan bogga la jabsaday waa opennet.net. Si aad u ogaatid joornaalada kuwa bedelaya dacaayad, website-yadaagu waa meesha xayeysiinta xorta ah
Khariidaduhu waxay sii wadaan dirista boostooyinka spam ee dad badan oo isticmaalaya macluumaadkaaga, sida usernames ama passwords. Statistica waxay muujinaysaa in 54% dhammaan emailada la diray ama la helay ay yihiin spam..Warbixin falanqayn oo kale ayaa soo jeedisay in kombiyuutarrada ay waxyeelleynayaan boggaga WordPress oo ay u isticmaalaan inay diraan emailada spam si dad badan oo maalin kasta ah. Xaaladaha intooda badan, dadka websaydhku xitaa ma ogaan karaan in boggooda ay ku dhufteen hackers. Waxa kale oo ay ogaan karaan in websaydhadu hoos u dhacaan oo ay kordhiyaan dhibcaha ee server-ka ayaa noqday dhibaato caadi ah. Weeraryahannadu waxay helayaan laba faa'iido oo waaweyn oo laga helo arrintan: marka hore, waxay isticmaalaan ilahaaga adeegga lacag la'aan. Marka labaad, waxay sumcaddaada ku burburiyaan internetka waxayna burburiyaan darajadaada bogga ee natiijooyinka raadinta.
Hackers ama spammers ayaa sidoo kale ku lug leh hawlaha xaasidnimo. Redirects waxay ku habboon yihiin iyaga si ay u qaboojiyaan gaadiidka si aad u hesho boggaga kala duwan ee xaasidnimo iyo waxyeelada leh. Isticmaalayaasha xitaa ma ogaan karaan in ay taasi dhacayso iyaga, waana wax caadi ah marka xayeysiisyadaadu aysan si habboon u muujin. Weeraryahannadu waxay ka faa'iidaystaan ​​dib-u-dirista waxayna u diraan taraafikada tayada sare leh ee boggooda internetka. Ujeedadoodu waa inay sare u qaadaan qiimeynta mashiinka raadinta ee goobahooda oo waxay ku faafiyaan internetka.
Xayeysiinta Qalabka Aqoonsiga:
Khariidaduhu waxay isticmaalaan bogagga phishing si ay u nacaan dadka martida ah si ay u bixiyaan macluumaad gaar ah ama xasaasi ah. Inta badan, waxay ku dhejiyaan bangiga ama dukaamada iyo isku dayaan in ay naga helaan si ay u siiyaan macluumaad sida usbuucyadeena iyo sirta. Sidoo kale waxay xaddidaan faahfaahinta kaararka deynta oo isticmaalaya bogagga phishing. Koxootiyeyaashu waxay qabtaan macluumaad badan oo ku saabsan goobta WordPress ee caanka ah, tusaale ahaan bogga phishing waa eff.org.
Ransomware waa barnaamij khaas ah oo xakameyn kara helitaanka goobtaada wuxuuna kaa doonayaa inaad bixiso madax furasho haddii aad rabto in aad dib u soo celiso. Kootariyayaashu waxay isticmaalaan ransomware sida qaabka loo kasbado, iyo waxay weerartaa websiyo badan iyo blogs badan. Si looga hortago weerarrada ransomware, waa inaad haysataa nuqullo faylashaada ah. Haddii aad haysato faylasha faylasha, waxaa laga yaabaa inaad bixiso madax-furashada qandhada, maadaama aysan kuu oggolaan doonin inaad isticmaasho goobta WordPress-gaaga ujeedo ganacsi.
Iyadoo aan loo eegin nooca ganacsiga ee aad sameyneyso iyo inta jeer ee aad boggaaga WordPress u hesho gaadiidka, hackers ama weeraryahanadu si sahlan u ogaan karaan sida loo isticmaalo sababaha shakhsiyeed